Sidee loogu soo duuduubaa hadiyadaha kirismaska ​​bandhig wanaagsan | Abuurista khadka tooska ah
Sidaad horeyba u ogtahay, habka aan nahay soo bandhig shey, cuntada ama shay kasta saameyn ku yeesho aragtideena wanaagsan ama taban. Dareenka ugu horreeya xitaa, marar badan, ayaa ka muhiimsan hadiyadda lafteeda. Ku "sidee" dhaafi karaa "taasi".
Haddii aad eegto noocyo badan haddii aysan badidoodu ahayn, waxay ku bixiyaan qayb ka mid ah miisaaniyadooda baakadaha iyo waxaas oo dhan oo tilmaamaya. Waxaan tixraaceynaa maalgashiga ay ku sameynayaan cilmi baarista, nashqadeynta iyo soo saarista.
1 Soo bandhig hadiyad si fiican loo duubay
2 Sideen ku helaa baakad ama soo bandhig wanaagsan?
3 Adeegsiga sanaadiiqda hadiyad ahaan
4 Kuweena bixiya tikidhada ama tikidhada: baqshadaha shaqsiga ah
5 Boorsooyinka waraaqaha soo jiidashada leh
6 Dambiile dambiil si ay hadiyado isugu geystaan
Soo bandhig hadiyad si fiican loo duubay
Waa inaan ka fikirnaa wax yar sida calaamadaha ganacsiga oo aan siino hadiyaddeena muhiimada ay u qalanto inay u ekaato. Taasi waxay ka dhigan tahay waa inaan noo shaqee bandhigga, dhammaan faahfaahinta isku dar. Waxa ugu horreeya ee laga fogaado waa waraaqaha hadiyadaha oo tayo liita, oo aan waxba na siinin, xitaa way goyn karaan. Waxay xirtaan oo jeexjeexaan iyagoo siinaya xirmadeena muuqaal jilicsan.
Sideen ku helaa baakad ama soo bandhig wanaagsan?
Waxaan kugu siineynaa jawaabta maqaalkan, oo is deji maxaa yeelay waxaan leenahay dhammaan noocyada:
Walxaha waaweyn iyo kuwa yaryar.
Hadiyadaha leh Alaab badan.
Tigidhada ama tigidhada show qaar ka mid ah.
Duubab kuwa aad u badan waqtiga.
Muuji fikradaha kuwa aan waqti badan galin karin ama aan lahayn xirfado farsamo.
Adeegsiga sanaadiiqda hadiyad ahaan
Waxaan u adeegsan karnaa sanaadiiq si hadiyadeena loo ilaaliyo, oo jidka agtiisa, wax walboo waa ka labis badan yihiin uguna qurux badan yihiin. Sidoo kale, haddii hadiyadeena ay leedahay walxo badan waa hab ku habboon in la isugu geeyo. Habkani sidoo kale wuu ina caawinayaa haddii aanan haysan waqti badan, in kasta oo aan weliba waqti u huri karno oo ka dhigi karno mid dhammaystiran. Aan aragno fikrado qaar si sanduuqayagu u toban u noqdo.
Waan awoodnaa Buuxi con xiirashada warqadaha o balaastig ah. Ikhtiyaar kale ayaa ah in la isticmaalo warqad cad, waa warqad aad u fudud oo dhuuban. Faa'iidadeeda weyn, kiiskan, waa inay runti tahay si fudud wax looga qaban karo. Dhammaan agabyadan waad awoodaa iibsato en dukaamada internetka ama meel kasta oo ka mid ah qalabka o baaruud.
Siinta midab badan iyo firfircoonida ayaa qaar dhigta nacnac o macmacaanka. Xitaa waan ku farxi karnaa midabbada midabada leh. Aynu helno a buuxi waxtarka, taasi waa, waa ka sii dhammaystiran tahay. Fikradda ayaa ah in qofka hadiyada la siiyaa uu furo sanduuqa, waxay leeyihiin dareemid mid aad u buuxa. Muuqaal ahaan wuu guuleysanayaa, waxay umuuqan doontaa mid shaqeynaysa, dhameystiran oo cajiib ah.
Kuweena bixiya tikidhada ama tikidhada: baqshadaha shaqsiga ah
Haddii hadiyaddaadu tahay warqad maxaa yeelay waad daabacday tigidhada inaad tagto tiyaatarka, kubada cagta ama dhacdo kale adiguna waxaad dhigaysaa gudaha a fidsan oo caajis badan, waxaan kugula talineynaa inaad sii wadatid aqrinta tan darteed Waad tagaysaa a xiisaha.
Ha u dagin oo ku duub dhererka hadiyaddaada. Waxay u rogi karaan baqshaddaada farshaxan. Taariikhahaas, waad awoodi kartaa baqshadda u beddelo astaan ​​ama astaamo Kirismas ah. Waxaan kuu daynaynaa fikradaha qaarkood, kamana daali doonno ku celcelinta in ay jiraan kiisaska oo dhan. Tusaalooyin fudud y kuwa kale oo sii faahfaahsan kuwa waqti u hela kuna raaxeysta farsamada gacanta. Halkan aan aadno!
Baqshadahan ayaa kala ah gacanta laga dhigay. Waxaan u isticmaali doonaa kaararka midabbada kala duwan leh oo aan u goyn doonno siinta qaabka ku habboon si aan hadhow ugu dhejino qaab aan ku heli doonno jilayaal Kirismas kala duwan. Xaaladdan oo kale ayaannu ku tusaynaa deerada. Way fududahay in la sameeyo, tan iyo haddii aan iibsanno baqshadaha bunni, waa inaan ku dhameystirnaa dhowr faahfaahin:
Geesaha midab bunni ah oo midabkiisu ka duwan yahay baqshadda. Haddii ay dhacdo in baqshaddeennu ay tahay bunni madow, waxaan u isticmaali doonnaa midab khafiifsan geesaha iyo dhinaca kale.
ka indhaha Waxaan ka samayn doonnaa iyaga oo leh kartoon cad oo loo kala gooyey dhinacyo. Dhexdooda ayaynu ku dhegi doonnaa qaybo yaryar oo midab kale leh. Waxaan sidoo kale ku sawiri karnaa astaamo.
La Sanka oo cas Waa taabashada ugu caansan ee astaantan. Waxaan ku dhejin doonaa dhabarka saddex xagalka dambe.
Fikrad kale, oo aan shakhsi ahaan u maleynayo asal ah, waa in dib loo abuuro dharka santa claus o Santa Claus. Xitaa waa ka sii badan tahay fudud ka koreeya. Xaaladdan oo kale, waan iibsan doonnaa baqshadaha cas. Waxaan ka jari doonnaa xariijin ballaaran oo madow si aan dib ugu soo celino suunka dharka iyo leydi dahab ah u ah suun. Waxaan dhajinaa waxaanan horeyba u haysannaa baqshad hal abuur leh iyo kirismas. Sida aan ku aragno sawirka, waan awoodnaa qor el nombre qofka hadiyada lasiin doono ee xarunta.
Waan awoodnaa qurxinta baqshadaha qurxinta ama jilayaasha Kirismaska. Waxaan leenahay ikhtiyaar u ah inay ku sawiraan ama samee halabuur leh kaararka kaydka, ama soo dejiso sawir ka soco internetka oo ku dhaji. Waa quruxsan deg deg ah si ay u qabtaan natiijaduna, sida aan ku aragno sawirka, way wanaagsan tahay.
Iyo hubaal xulashada ugu badan ee la doonayo ayaa ku xigi doona Waxaa loogu talagalay dhammaan kuwa ma haysatid waqti kugu filan ama kuma fiicnid farsamada gacanta. Kuwani baqshadaha waa la soo dejisan karaa, sidaa darteed, waxaad kaliya u baahan tahay inaad wax ka qabato cinwaanada aan ka heli doonno hoosta y soo dejiso qoraallada. Daabac, jar oo dhaji. Waxay kuu xaqiijin doontaa a naqshad qurux badan oo asal ah.
Link la soo dejin karo ee Santa Claus.
Link la soo dejin karo Nin baraf wata.
Boorsooyinka waraaqaha soo jiidashada leh
Haddii aan hadiyado ku iibsanno dukaan waxay na siinayaan boorso ay ku taalo calaamadda oo ku taal bannaanka. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad u bedesho bacda mid ku habboon kan Taariikhaha kirismaska.
Kuwa badan baa jira bacaha la qurxiyay leh ujeedooyinka kirismaska ​​ee aan kari karno iibso samee, laakiin hadaad rabto inaad isku calaamadeyso hadiyad wanaagsan oo DIY ah waad awoodaa isku qurxiso boorso warqad fudud ah. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad iibsato bacaha warqadda buniga ah, kuwa noloshaada oo dhan u oggolow in male-awaalkaagu duulo. Waxaad codsan kartaa xoogaa fikrado ah oo aan uga tagnay si aan boorsooyinka ugu sameysano kaararka kirismaska. Soo Galaya Halkan inaad tagto boostada.
Kani waa tusaale fudud oo aan horay u aragnay si loo sameeyo kaararka Kirismaska. Waxay ku saabsan tahay si loogu beddelo bacda wejiga Santa Claus. Sidaad u aragto, waxaan u adeegsan karnaa kuwa badan qaabab kale:
Dambiile dambiil si ay hadiyado isugu geystaan
Haddii ay dhacdo inaan haysanno walxo dhowr ah hadiyado ahaan, oo aynaan garanayn sida loo isugu geeyo, waxaan abuuri karnaa dambiilkeenna By habka Kirismas badan. Fikradda ayaa ah in wax walba ay sii jiraan si fiican loo dhigay si aysan noo dhaqaajin iyo muuqaal ahaan fiican. Waxaan u isticmaali karnaa, sida sanduuqyada oo kale, a buuxi asalka. Waxaan udhigi doonnaa dhamaan walxaha si istiraatiiji ah, ugu dambeyntiina waxaan ku duubi doonnaa a warqad hufan taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan wax ku aragno gudaha.
Ugu dambeyntii, waxaan ku xidhi doonaa xadhig. Waxaan ku dari karnaa a xerin ama kubad (oo aan ku lalmino geedka) si aan u siino taabashada kirismaska ​​isla markaana aan u laalaadinno magaca qofka qaata.
Haddii aan aragno taas gudaha gudaheena aadbaan u madhan nahay, waxaan dhigi karnaa qaar Caruusadda kirismaska ama a nougat waayo, dhig dambiil oo sii taabasho badan oo kirismas ah.
In fikradaha la'aani aysan cudurdaar u aheyn Kirismaskaan inaad hadiyadahaaga ugu soo bandhigto sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. MERRY KRISTI!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loo duubo hadiyadaha Kirismaska